Isonto 1 DQ 1 Amandla amaningi Cabanga ngesaga sase Afrika Isongo esisodwa asihlangananga. Xoxa ngenqubo yokushintshwa kwezenhlalo kanye nokusizakala kokuhlela ndawonye ukuze nishintshe ngaphezu kwemizamo y (30% off)
Isonto 1 DQ 1 Amandla amaningi Cabanga ngesaga sase Afrika Isongo esisodwa asihlangananga. Xoxa ngenqubo yokushintshwa kwezenhlalo kanye nokusizakala kokuhlela ndawonye ukuze nishintshe ngaphezu kwemizamo y
Buy Now $30.00 USD
Your Price: $30.00 (30% discount)
Buy with 43 download credits
Isonto 1 DQ 1 Amandla amaningi Cabanga ngesaga sase-Afrika Isongo esisodwa asihlangananga. Xoxa ngenqubo yokushintshwa kwezenhlalo kanye nokusizakala kokuhlela ndawonye ukuze nishintshe ngaphezu kwemizamo yomuntu ngamunye. Funda ngezindlela noma izindlela ezingathathwa zokuguqula ushintsho lomphakathi oluthuthukayo. Xoxa ngezindlela ezimbili noma ezintathu ezibonakala zisebenza kakhulu noma zisebenza kuwe. Sekela imibono yakho ngezethenjwa futhi uphendule okungenani kokuthunyelwe kwabalingani ababili.
Lapho kunezingqinamba naphakathi komphakathi, ukwenza imihlangano yezinhlangano zomphakathi kuyindlela enhle yokuxoxa ngayo ngenkathi kuhilela wonke umuntu. Ukuba nenhlangano yomphakathi kuyindlela enhle yemiphakathi yokuqinisekisa ukuthi inezinto ezinhle emphakathini ezingakwazi...
12.89 KB (0.01 MB)